Mogadishu Journal » Chelsea oo ku Guuleystay Koobka FA Cup Markii ay Garaaceen Manchester United+SAWIRRO
Kooxda Cheslea ayaa si cariiri ah kaga adkaatay Manchester united finaalka FA Cup kadib cayaar ku dhamaatay 1-0.
Goolka qura ee cayaarta ayaa yimid qeybta kowaad waxaana rigoore ku dhaliyay eden Hazard kadib markii uu qalad ku galay Phil jones isla laacibka.
Isla qeybta kowaad kooxda Chelsea ayaa laga diiray kubadd u muuqatay rigoore markii uu ku dhacay diilinta ganaaxa laacibka Bakayoko oo caadis kala kulmay Nemanja Matic balse garsooraha kulanka Micheal Olivier ayaa diiday.
Qeybta dambe kulanka kooxda Manchester united ayaa laga diiday gool uu dhaliyay Alex sanchez maadama uu ku jiray Garab dhaaf ama leen ka bax.
Laakiin kooxda united ayaa duulaan aan kala joogsi laheyn ku aheyd goolka Chelsea ilaa dhamaadka cayaarta inkastoo uu fursado badan ka badbaadiyay goolhayaha Blues Thibaut Courtois.
Guusha Chelsea waxa ay ka dhigan tahay in koobkan ay hanteen markoodii sideedaa iyo markii u horeysay tan iyo sanadkii 2012-kii
Waa markii labaad oo ay koobka FA Cup ay ka qaadaan kooxda united horey waxa ay kaga qaadeen sanadkii 2007 xiligaas waa kooxda maamulayay macalinka hadda Manchester united ee Jouse Mourinho.
Chelsea ayaa xagaagan ku dhameysatay kaalinta shanaad kala sareynta horyaalka basle guushan ayaa kaga dhigan in kooxda aysan koob la’aan ka bixin tartamada.
Balse tan uma noqon doono miduu kaga badbaado Conte caadiska ka saaaran dhanka Maamulka sida uu isagaba sheegan kulanka ka hor.
Somaliland oo xabsiga dhigtay Nabaddoon Maxamed Muuse